मैले भोगेको माओवादी जनयुद्ध ?::Pathivara News
मैले भोगेको माओवादी जनयुद्ध ?
नवराज विष्ट नेपालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको २२ वर्ष पूरा भएको छ । र, जनयुद्ध पूरा भयो वा भएन भन्ने केही मतान्तर रहेपनि नेपाली राजनीतिको मूलधारमा आएको माओवादी केन्द्रले जनयुद्धले आफ्नो चरण पूरा गरेको र अर्धऔपनिवेशिकताको अवस्थाबाट मुलुकमाथि उठेको व्याख्या गर्यो । नेपालमा राजशाही समाप्त गर्ने उद्देश्यसहित सशस्त्र माओवादीले आफ्नो आन्दोलन फेब्रुअरी सन् १९९६, विस २०५२ सालबाट आफ्नो अभियान सुरु गर्यो । मुलुकको आधाभन्दा बढी हिस्सामा आफ्नो सक्रियता देखाउन जनयुद्धले आधा दशक खर्च गर्यो । समयक्रमसँगै राज्यसत्ताको नेतृत्वसमेत माओवादीले गर्यो ।
कक्षा ११ पढ्दै गर्दा माओवादीको झनै जग्जगी भयो । माओवादी स्कुलमै आएर लामो, रातो कपाल काट्ने गर्न थाले । चुज पाइन्ट काटिदिने गर्न लागे । कुरो एक दिनको हो, बिहीबार हाट लाग्छ चतरामा । अर्चले घर भएकी एकजना राई थरकी चेली धरानबाट आएकी रहिछन् । अलिक मोर्डन टाइपकी । रातो कपाल पारेकी । उनको कपाल मुडुलै पारेर माओवादी कार्यकर्ताले काटिदिए । ती चेलीलाई कपाल काटिएकै कारण घरबाट बहिस्कार गरिएछ । यो कुरो जनमानसमा आयो । स्कुलेहरुको कपाल र पाइन्ट काटिदिएको रिस थियो स्थानीयलाई ।
फेरि घरबाटै एउटी चेली माओवादीका कारणले बहिस्कार हुनु पर्यो । रिसले चतरा तात्यो । घरघरबाट माओवादी विरुद्ध नारा निस्किए । मुलुकमै पहिलोपटक चतरावासीले माओवादीको अतिवाद विरुद्ध नारा लगायो । माओवादी हुँ भनेर हिँड्नेलाई स्थानीयले खोजीखोजी कुटे । कति विस्थापित भए । धेरै समयसम्म चतरामा निस्किएनन् । नेपाल टेलिभिजनले माओवादीविरुद्धको विद्रोह खिच्यो । त्यहाँ एकजना संवाददाता थिए । तर त्यो प्रसारण भएन । पछिसम्म केही फोटोहरु देखिन्थ्यो ।